विश्वकप छनोटमा हारेपछि रोनाल्डोले भर्खर लेखेको स्ट्याटसले विश्व हल्लायो , के लेखे उनले ? - Juneli Daily
विश्वकप छनोटमा हारेपछि रोनाल्डोले भर्खर लेखेको स्ट्याटसले विश्व हल्लायो , के लेखे उनले ?
JD — November 15, 2021 add comment
फुलहमका स्ट्राइकर अलेक्सान्डर मिट्रोभिचले खेलको अन्तिम मिनेटमा गोल गर्दै सर्बियालाई सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकपमा पुर्‍याएका छन् । आइतबार राति भएको खेलमा सर्बियाले पोर्चुगललाई उसैको घरेलु मैदानमा २–१ गोलले हराएको हो ।
पोर्चुगललाई विश्वकपमा छनोट हुनका लागि खेलमा मात्र बराबरी गरे पुग्ने थियो । खेलको दोस्रो मिनेटमा नै रेनाटो सान्चेजले पोर्चुगललाई अग्रता पनि दिलाए तर डुसान टाडिचले पहिलो हाफको अन्त्यतिर खेल बराबरी गरे । बराबरीतर्फ अग्रसर खेलको ९० औँ मिनेटमा मिट्रोभिचले गोल गर्दै पोर्चुगलको सपना चकनाचुर पारे ।
जीतसँगै समूह ए मा २० अङ्कसहित सर्बिया शीर्ष स्थानमा रह्यो । अब अर्को वर्ष हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनका लागि पोर्चुगलले मार्चमा प्लेअफ खेलहरु खेल्नुपर्नेछ । पराजयसँगै विश्वकप छनोट खेलहरूमा आफ्नो घरेलु मैदानमा अपराजित रहने पोर्चुगलको यात्रामा पूर्ण विराम पनि लागेको छ । पछिल्लो पटक पोर्चुगल सन् २०१३ को अक्टोबरमा पराजित भएको थियो ।
फेरी शनिबारदेखि तिनदिन सार्वजनिक बिदा !
संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पनि तालमेल , कसले कति सिट पाउने ?
पोखरा महानगरमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकिकृत समाजवादी विजयी !
भरतपुरमा रेणु दाहाल विजयी !